Maxaa kasoo baxay Shirka Madaxda IGAD (Sawirro+Warbixin) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Dibadda > Maxaa kasoo baxay Shirka Madaxda IGAD (Sawirro+Warbixin)
Maxaa kasoo baxay Shirka Madaxda IGAD (Sawirro+Warbixin)
March 26, 2017 admin396
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dalalka Urur Goboleedka IGAD ayaa isugu yimid shir gaar ah oo looga arrinsanayay sidii xal waara loogu heli lahaa qoxootiga Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay hay’adaha ka shaqeeya samafalka iyo horumarinta in ay u guuraan gudaha Soomaaliya si ay u daboolaan baahiyaha taagan.
“Waan dareensannahay duruufaha amni ee ka jira dalka, laakiin dalka intiisa badan waa nabad. Tijaabooyinkii hore waxaan ka barannay in marka ay hay’adaha ku shaqeeyaan gudaha dalka aad loo dareemo saameyntooda marka loo barbardhigo in ay ku shaqeeyaan meel ka baxsan dalka.”
Akhriso: Gudoomiyaha Barlamaanka Galmudug oo Warqad Jawaab u diray RW Kheyre
Isbahaysiga Xisbiyada Soomaaliyeed oo dalbaday in dib loogu laabto dhismaha Xakuumadda cusub
Ganacsade Xalay lagu dilay magaalada Muqdisho
UNICEF “5.2 Million oo caruur ah ayay cunto la’aan heysaa”
June 24, 2017 Saadaq Laki
Sawirro: Dufcadii 2-aad oo ka Qalinjabiyey Dugsiga Waaberi Godinlabe